ဝန်ထမ်းမိတ်ဆက် | saetanar
ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် ပညာ သင်ကြားခြင်း စီမံကိန်း
လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တိုးချဲ့ခြင်း
Tin Lay (Executive Director)
I joined Saetanar in October 2003. I enjoyed working together with Saetanar Staff. I am now 81 years old. I am still youngat heart in spite of age and willing to continue working for Saetanar. May the Nippon Foundation ( Saetanar ) continue to assist MyanmarPeople for the present and the future.
ဦးမိုးကိုကို (Assistant Field Officer / Driver)
​အား​လုံး​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ​လို့​နှုတ်​ခွန်း​ဆက်​သ​ပါ​တယ်။ကျွန်​တော့​နာ​မည် ​ဦး​မိုး​ကို​ကိုလို့​ခေါ်​ပါ​တယ်။၂၀၁၁ ​ဇန်​န၀ါ​ရီ​လ၁ရက်​နေ့​မှ​စ​တင်​ပြီး​စေ​တ​နာ​လူ​မှု​အ​ဖွဲ့​အ​စည်း​တွင်​ရှမ်း​ပြည်​နယ်​မြောက်​ပိုင်း​စီ​မံ​ကိန်း​ဒေ​သ​မှယာဉ်​မောင်း​အ​ဖြစ်တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​နေ​ပါ​တယ်။​စေ​တ​နာအ​ဖွဲ့​အ​စည်း​တွင်၇​နှစ်​ကျော်​ရှိ​လာ​သ​ည့်​အ​လျောက်​စေ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​၏ရည်​မှန်း​ချက်​များ​ဖြစ်​သော​ကျောင်း​ဆောင်​သစ်​တည်​ဆောက်​ခြင်း​လုပ်​ငန်း​မှ​တ​ဆင့်ဝင်​ငွေ​တိုး​လုပ်​ငန်း​များ​မှရပ်​ရွာ​ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​မှု​များ​ကို​တွေ့​မြင်​ရ​သ​ဖြင့်အ​လွန်ဝမ်း​မြောက်​မိ​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျား။ ​စေ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​အ​စည်း​တွင်​လည်းဆက်​လက်​ပြီး​ကောင်း​မွန်​အောင်​ကြိုး​စား​သွား​ပါ​မည်။
နန်းလောင်ခမ်း (Administration Staff)
U Than Myint (Field Officer)
Mingalarbar – My name is U Than Myint. I am working at Lashio Saetanar Office since may, 2013. Saetanar had constructed new school buildings, repaired old school buildings and contributed Community Development Fund to the local community to improve the education environment, which I believe isavery noble job. AsaSaetanar staff I help to improve the education of the local people, So I am very glad to work asaSaetanar staff.
နန်းလှရင် (Assistant Field Officer)
Aye Aye Thant (Project Division Director)
I am willing to contribute as able as I can in EPD Project of Saetanar implementing for Community Development for our rural people both the present and the future.
နန်းဝင်းဝင်းချို (Administration Officer)
​​အား​လုံး​ပဲ ​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ​ရှင့်။ ​ကျွန်​မ​နာ​မည်​က ​နန်းဝင်းဝင်း​ချို​ဖြစ်​ပါ​တယ်​ရှင် ၊ ​စေ​တ​နာ​တောင်​ကြီး​ရုံး ​မှာ ​တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​နေ​တာ ၈ ​နှစ်​ရှိ​ပါ​ပြီ​ရှင့်၊ ​စေ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​ရဲ့ ​စီ​မံ​ကိန်း​လုပ်​ငန်း​များ​က ​ကျွန်​မ​တို့​ဒေ​သ ​ဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​အ​တွက် ​ဆောင်​ရွက်​ရာ​မှာ​များ​စွာ​အ​ထောက်​အ​ကူ​ပြု​တဲ့​လုပ်​ငန်း​ဖြစ်​ပါ​တယ်​ရှင့်၊ ​ကျွန်​မ ​က​လည်း ​ရွာ​မှာ​မွေး​တဲ့​သူ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ​ဒေ​သ​ဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​လုပ်​ငန်း​မှာ ​ကူ​ညီ​ပေး​တဲ့​စေ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​ကို​လည်း ​ရပ်​ရွာ​လူ​ထု ​နှင့်​ထပ်​တူ ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်​ရှင့်။ ​စေ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​တွင်​လည်း ​ကျွန်​မ​တက်​တဲ့​ပ​ညာ ​အ​နည်း​ငယ်​နဲ့ ​ယ​ခု​လို ​ပါဝင်​ခွင့်​ရ​တဲ့​အ​တွက်ဝမ်း​သာ​ပါ​တယ်​ရှင့်။
ခွန်သိန်းမောင် (Assistant Field Officer/Driver)
ကျွန်​တော်​က​တော့​ဦး​ခွန်​သိန်း​မောင်​ပါ။​ရှမ်း​ပြည်​နယ်​တောင်​ပိုင်း​တာင်​ကြီး​မြို့​တွင်​နေ​ပါ​တယ်။​စ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​ကို​လွန်​ခဲ့​သည့်၂၀၀၃​ခု​နှစ်​က​စ​တင်ဝင်​ရောက်​ခဲ့​ပြီး​လက်​ထောက်​ကွင်း​ဆင်း​အ​ရာ​ရှိ​နဲ့​ယာဉ်​မောင်းဝန်​ထမ်း​အ​ဖြစ်​တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​နေ​ပါ​တယ်။ ​စေ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​တွင် ​တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ခွင့်​ရ​သည့်​အ​တွက်​ကျး​ဇူး​အ​များ​ကြီး​တင်​ပါ​တယ်။​နေ​ရာ​ဒေ​သ​မျိုး​စုံ​လည်း​ရောက်​ဖူး​ပြီး​အ​တွေ့​အ​ကြုံ​လည်း​အ​များ​ကြီး​ရ​တယ်။​ဒေ​သ​ခံ​ပြည်​သူ​တွေ​နဲ့​ပူ​ပေါင်း​လုပ်​ကိုင်​ရ​ပြီး ​ဒေ​သ​ခံ​ပြည်​သူ​များ​ကျွေး​သည့်​ထ​မင်း​ကို ​အ​ရ​သာ​ရှိ​ရှိ​စား​သုံး​ရ​သည့်​အ​တွက်​လည်း​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ။
ဦးခွန်သန်းဝင်းဦး (Assistant Field Officer/Driver)
​ကျွန်​တော့်​နာ​မည်​မှာ​ဦး​ခွန်​သန်းဝင်း​ဦး​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​ကျွန်​တော်​သည်​ရှမ်း​ပြည်​နယ်​တောင်​ပိုင်း၊ ​တောင်​ကြီး​မြို့ ​တွင် ​နေ​ထိုင်​ပါ​တယ်။​လက်​ရှိ​စေ​တ​နာ​တောင်​ကြီး​ရုံး​တွင်​လက်​ထောက်​ကွင်း​ဆင်း​အ​ရာ​ရှိ ​အ​ဖြစ်​လုပ်​ကိုင်​နေ​ပြီးဝန်​ထမ်း​သက်​တမ်း၇ ​နှစ်​အ​တွင်း​ရောက်​ရှိ​လာ​ပြီ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​စေ​တ​နာ​တွင်ဝန်​ထမ်း​အ​ဖြစ်​လုပ်​ကိုင်​ခွင့်​ရ​ရှိ​သည့်​အ​တွက်ဝမ်း​သာ​ကြည်​နူး​ပီ​တိ​ဖြစ်​ရ​ပါ​သည်။
ခွန်ရဲနောင် (Field Officer)
​အား​လုံး​ပဲ​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ​ခင်​ဗျာ။ကျွန်​တော်​က​တော့​စေ​တ​နာ​ရုံး(​တောင်​ကြီး)​မှာ​ကွင်း​ဆင်း​အ​ရာ​ရှိအ​ဖြစ်​နဲ့​တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​နေ​တဲ့​ဦး​ခွန်​ရဲ​နောင်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။​ကျွန်​တော်​စေ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​နဲ့​လက်​တွဲ​ခဲ့​တာ​အ​ခု​ဆို​ရင်(၅)​နှစ်​ပြည့်​ပြီ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။​မ​ဖွံ့​ဖြိုး​သေး​တဲ့​ဒေ​သ​တွေ​မှာဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​လုပ်​ငန်း​ပြု​လုပ်​ပေး​နေ​တဲ့​နီ​ပွန်​ဖောင်​ဒေး​ရှင်း​ရဲ့​မွန်​မြတ်​တဲ့​အ​လှူ​တွေ​ကို​အ​ရမ်း​ဂုဏ်​ယူ​မိ​ပါ​တယ်။​အ​ခု​လို​နီ​ပွန်​ဖောင်​ဒေး​ရှင်း​နဲ့​လက်​တွဲ​ပြီး​လုပ်​နေ​ရ​တဲ့​စ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​မှာ​အုတ်​တ​ချပ်၊​သဲ​တ​ပွင့်​အ​ဖြစ်​ပါဝင်​ခွင့်​ရ​တာ​ကို​လည်း​ဂုဏ်​ယူ​မိ​ပါ​တယ်။။​ရှေ့​ဆက်​ပြီး​တော့​လည်း​မိ​မိ​တို့​ဒေ​သ​ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​နိုင်​ဖို့​ကိုယ်​တတ်​နိုင်​တဲ့​နေ​ရာ​တစ်​နေ​ရာ​က​နေ ​ပါဝင်​နေ​ပါ​ဦး​မယ်​ခင်​ဗျာ။
U Khuah Hrang (Assistant Field Officer/Argiculture)
My name is U Khuah Hrang. I have jointed to Saetanar Taunggyi Office on 1st July 2014 as Assistant Field Officer (Agriculture Specialist). I have worked in Myanmar Agriculture Department for over 30 years. I retired as Deputy Director of Agriculture in Lashio, Northern Shan State. I am so glad to be part of Saetanar team.
ခွန်နေအောင် (Assistant Field Officer)
အား​လုံး​ပဲ​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ​ခင်​ဗျာ။​ကျွန်​တော်​နာ​မည်​က​တော့​ဦး​ခွန်​နေ​အောင်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ၂၀၁၄ ​ခု​နှစ် ​မတ်​လ ၄ ​ရက် ​နေ့​က​စ​ပြီး ​စေ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​မှာ ​လက်​ထောက်​ကွင်း​ဆင်း​အ​ရာ​ရှိ​အ​နေ​နဲ့​တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ခဲ့​ပါ​တယ်။​ကိုယ့်​မြန်​မာ​ပြည်​ရဲ့​ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​မှာ ​အ​ခန်း​က​ဏ္ဍ​တစ်​ခု​က​နေ​ပါဝင်​ကူ​ညီ​ခွင့်​ရ​လို့ဝမ်း​သာ ​ကြည်​နူး​မိ ​ပါ​တယ်။ ​စေ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​တစ်​ခု​လုံး​လုပ်​ငန်း​အ​ကောင်​အ​ထည်​ဖော်​ဆောင်​ရွက်​နိုင်​ရန်​အ​လို့​ငှာ​ရန်​ပုံ​ငွေ​ထောက်​ပံ့​ပေး​တဲ့ ​နီ​ပွန်​ဖောင်​ဒေး​ရှင်း​ကို ​လည်း​ကျေး​ဇူး​အ​ထူး​တင်​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​နောက်​လာ​မည့် ​စီ​မံ​ကိန်း​နှစ်​တွေ​မှာ​လည်း​ကိုယ်​တက်​အား​သ​ရွေ့​ပါဝင်​ကူ​ညီ​သွား​မယ်​လို့​ပြော​ကြား​ရင်း ​နှုတ်​ခွန်း​ဆက်​သ​အပ်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ။
'I joined Saetanar in 2005. Since the time, I am surrounded by wonderful people and enjoying my work. Myanmar is changing, but I think that there are still many things to do. I would like to continue my efforts as much as possible.'
Su Htwe Myint (Administration Director)
I feel that responsibility is very important for all our employees. Beingastaff of this organization, my responsibilities are to perform my duties well enough. My long-term goal is to keep on growing with this organization which gives me opportunity to continue learning so that I would be able to assume additional responsibilities.I am determined to enhance my skills and contribute more to community development. I’ve been working with Saetanar organization for 15 years already. Saetanar is my second family and I am devoted to Seatanar’s community work.
Ma Cho (Cleaner)
I had started working at Saetanar in 2005. I am very happy because I hadachance to work at Saetanar which is supporting Schools for Myanmar Education Development as like as the name (Saetanar means “Goodwill”, “Thoughtfulness” in Myanmar Language).
Su Nandar Win (Assistant Admin Officer)
I am Su Nandar Win, Assistant Administration officer of Yangon Office. I joined Saetanar on August 1, 2013. I am proud to beamember of Saetanar as I can serve the needy people through complementing the essentials of EPD projects. It’s my pleasure and grateful to Saetanar for giving meachance to contribute in my interest of humanitarian development activities.
မ​င်္ဂ​လာ​ပါ။​ကျွန်​တော်​က​စေ​တ​နာ(​ရန်​ကုန်)​မှာ​ယာဉ်​မောင်း​အ​ဖြစ်​တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​နေ​တဲ့ ​စော​တင်​မောင်​ထွန်း ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။​စေ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​၏​လုပ်​ဆောင်​ချက်​မှာ​မ​ဖွံ့​ဖြိုး​သေး​သော​ကျေး​လက်​ဒေ​သ​များ​တွင်​ကျောင်း​များ​ဆောက်​လုပ်​လှူ​ဒါန်း​ခြင်း​နှင့်​အ​ခြား​သောဝင်​ငွေ​တိုး​လုပ်​ငန်း​များ​ကိုရွာ​သူ/​ရွာ​သား​များ​နှင့်​ပူး​ပေါင်း​ဆောင်​ရွက်​သော​အ​ဖွဲ့​ဖြစ်​ပါ​သည်။​ယ​ခု​လို​မွန်​မြတ်​သော​အ​လုပ်​ကို​လုပ်​ဆောင်​နေ​သော​စေ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​တွင်​တစ်​ထောင့်​တစ်​နေ​ရာ​မှ​ပါဝင်​ခွင့်​ရ​တဲ့​အ​တွက်​အ​လွန်​ပင်ဝမ်း​သာ​ပီ​တိ​ဖြစ်​မိ​ပါ​တယ်။​ဂုဏ်​လဲ​ယူ​ပါ​တယ်။​ရှေ့​ဆက်​ပြီး​တော့​လဲ​စေ​တ​နာ​အ​ဖွဲ့​နဲ့​အ​တူ ​လူ​ထု​အ​ကျိုး​ပြု ​လုပ်​ငန်း​များ​လုပ်​ဆောင်​သွား​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ။ ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ။
Yangon:+95 1 656094,
Taunggyi : +95 81 2124356, +95 81 200557
Lashio : +95 82 26144
+95 1 651186
Room 205, Tower A, Myaing Hay Wun (Junction-8) Condo,
Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangone Township,
CopyRight © 2017 Saetanar. All Rights Reserved.
Designed by CREATIVE WEB STUDIO